Ndịozi Jizọs Arụọ Ụka Gbasara Onye Kacha Ukwuu n’Ime Ha | Ihe Ndị Mere ná Ndụ Jizọs
MATIU 26:31-35 MAK 14:27-31 LUK 22:24-38 JỌN 13:31-38
JIZỌS ENYE NDỊOZI YA NDỤMỌDỤ GBASARA ỊZỌ ỌKWÁ
JIZỌS EBUO AMỤMA NA PITA GA-AGỌNAHỤ YA
ỊHỤNANYA KA A GA-EJI AMA NDỊ NA-ESO ỤZỌ JIZỌS
Ná mgbede ikpeazụ Jizọs na ndịozi ya nọ, ọ sara ha ukwu iji kụziere ha ka ha na-adị umeala n’obi. Gịnị mere ihe a o mere ji daba adaba? Ọ bụ n’ihi ihe ndịozi ya mere. Ha ji ofufe Chineke kpọrọ ihe. Ma, ha ka na-arụ ụka n’etiti onwe ha onye ọ bụ n’ime ha kacha ukwuu. (Mak 9:33, 34; 10:35-37) Ha rụrịtakwara ụka ahụ ọzọ ná mgbede a.
Baịbụl sịrị: “Esemokwu kpụ ọkụ n’ọnụ bilitekwara n’etiti [ndịozi Jizọs] banyere onye ọ bụ n’ime ha nke yiri ka ọ bụ ya kasị ukwuu.” (Luk 22:24) Ọ ga-abụ na o wutere Jizọs ịhụ ka ha na-ese okwu ọzọ maka ihe a na-enweghị isi. Gịnị ka Jizọs mere?
Jizọs abaraghị ndịozi ya mba maka àgwà a ha kpara. Kama, o ji ndidi soro ha kwurịta okwu. Ọ sịrị ha: “Ndị eze nke ndị mba ọzọ na-eme ka à ga-asị na ọ bụ ha nwe ha, a na-akpọkwa ndị na-achị ha Ndị Ome Mma. Ma unu onwe unu agaghị adị otú ahụ. . . . N’ihi na olee onye ka ukwuu, ọ̀ bụ onye nọ na-eri ihe na tebụl ka ọ̀ bụ onye na-eje ozi?” O chetaziiri ha ihe yanwa na-eme, nke ọ chọrọ ka ha na-eme. Ọ sịrị ha: “Ma anọ m n’etiti unu dị ka onye na-eje ozi.”—Luk 22:25-27.
N’agbanyeghị na e nwere ebe ndịozi Jizọs na-anaghị emecha nke ọma, ha ahapụghị Jizọs ọbụna n’oge dị iche iche ọnwụnwa bịaara ya. N’ihi ya, ọ gwara ha, sị: “Mụ na unu na-agbakwa ndụ maka alaeze, dị nnọọ ka mụ na Nna m gbara ndụ.” (Luk 22:29) Ha niile akwụsịghị iso ụzọ Jizọs. Jizọs ji ndụ ya na ha gbara mee ka obi sie ha ike na ya na ha ga-anọ n’Alaeze eluigwe ma soro ya na-achị.
N’agbanyeghị na ndịozi Jizọs nwere olileanya na ha ga-eso Jizọs na-achị, ha ka bụ mmadụ, bụrụkwa ndị na-ezughị okè. Jizọs gwara ha, sị: “Setan achọsiwo ike ka a yọchaa unu dị ka ọka wit.” Ọ na-abụ a na-ayọcha ọka wit, ya ana-agbasasị. (Luk 22:31) Jizọs gwakwara ha, sị: “Unu niile ga-asụ ngọngọ n’ihi m n’abalị a, n’ihi na e dere, sị, ‘M ga-egbu onye ọzụzụ atụrụ, ìgwè atụrụ ya ga-agbasasịkwa.’”—Matiu 26:31; Zekaraya 13:7.
Pita turu ọnụ, sị: “Ọ bụrụgodị na ndị ọzọ niile asụọ ngọngọ n’ihi gị, m gaghị asụ ngọngọ ma ọlị!” (Matiu 26:33) Jizọs gwara Pita na tupu oké ọkpa akwaa ugboro abụọ n’abalị ahụ, ọ ga-agọnahụ ya. Jizọs kwukwara, sị: “Arịọsiwo m arịrịọ ike maka gị ka okwukwe gị wee ghara ịda mbà; gị onwe gị kwa, ozugbo ị laghachiri, mee ka ụmụnna gị dị ike.” (Luk 22:32) N’agbanyeghị ihe a Jizọs gwara Pita, Pita sịrị ya: “Ọ bụrụgodị na m ga-eso gị nwụọ, agaghị m agọnahụ gị ma ọlị.” (Matiu 26:35) Ndịozi ndị ọzọ kwukwara otu ihe ahụ.
Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya, sị: “Mụ na unu ga-anọkwu obere oge. Unu ga-achọ m; dị nnọọ ka m gwara ndị Juu, sị, ‘Unu apụghị ịbịa ebe m na-aga,’ otú ahụ ka m na-agwakwa unu ugbu a.” Ọ gwaziri ha, sị: “Ana m enye unu iwu ọhụrụ, ka unu na-ahụrịta ibe unu n’anya; dị nnọọ ka m hụrụ unu n’anya, ka unu na-ahụrịtakwa ibe unu n’anya. Mmadụ niile ga-eji nke a mara na unu bụ ndị na-eso ụzọ m, ma ọ bụrụ na unu enwee ịhụnanya n’etiti onwe unu.”—Jọn 13:33-35.
Mgbe Jizọs kwuru na ya na ha ga-anọkwu obere oge, Pita jụrụ ya, sị: “Onyenwe anyị, olee ebe ị na-aga?” Jizọs zara ya, sị: “Ị pụghị iso m ugbu a gaa ebe m na-aga, kama ị ga-eso m ma e mesịa.” Ihe a Jizọs kwuru gbagwojuru Pita anya, ya ajụọ Jizọs, sị: “Onyenwe anyị, gịnị mere na apụghị m iso gị ugbu a? M ga-atọgbọ mkpụrụ obi m n’ihi gị.”—Jọn 13:36, 37.
Jizọs chetaziiri ndịozi ya ihe ọ gwara ha mgbe o zipụrụ ha ka ha gaa kwusaa ozi ọma na Galili n’ejighị akpa ego na akpa nri. (Matiu 10:5, 9, 10) Ọ jụrụ ha, sị: “Ọ dịghị ihe kọrọ unu, ka ọ̀ dị?” Ha zara ya, sị: “Ee e!” Ma, oleekwanụ ihe ha ga-eme n’ụbọchị ndị na-abịa abịa? Jizọs gwara ha, sị: “Ka onye nwere obere akpa ego were ya, ka onye nwere obere akpa nri were ya; ka onye na-enweghịkwa mma agha ree uwe elu ya zụrụ otu. N’ihi na ana m asị unu na ihe a e dere aghaghị imezu n’ebe m nọ, ya bụ, ‘a gụnyere ya ná ndị na-emebi iwu.’ N’ihi na ihe e dere banyere m na-emezu.”—Luk 22:35-37.
Ihe Jizọs na-ekwu okwu ya bụ gbasara oge a ga-akpọgide ya na ndị mmehie n’osisi ịta ahụhụ. E mechaa, mkpagbu kpụ ọkụ n’ọnụ ga-abịara ndị na-eso ụzọ ya. Ha chere na ha dị njikere maka ihe ga-abịara ha. N’ihi ya, ha gwara Jizọs, sị: “Onyenwe anyị, lee! anyị ji mma agha abụọ.” Jizọs sịrị ha: “O zuola.” (Luk 22:38) N’oge na-adịghị anya, Jizọs ga-eji mma agha abụọ a kụziere ha ihe ọzọ dị mkpa.
Gịnị mere ndịozi Jizọs ji na-arụrịta ụka? Gịnịkwa ka Jizọs mere banyere ya?
Olee uru ọgbụgba ndụ ahụ Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya gbara ga-abara ha?
Olee ihe Jizọs gwara Pita mgbe ọ nyara isi na ya agaghị asụ ngọngọ?
mailto:?body=Ndịozi Jizọs Arụọ Ụka Gbasara Onye Kacha Ukwuu n’Ime Ha%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1102014718%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Ndịozi Jizọs Arụọ Ụka Gbasara Onye Kacha Ukwuu n’Ime Ha